Basikety – Fiba 3×3 : hiroso amin’ny fifaninanam-pirenena ny FMBB | NewsMada
Manomboka avy hatrany ny taom-pilalaovana ho an’ny taranja basikety. Hiroso amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara eo amin’ny Fiba 3×3 sahady ny federasiona amin’ity volana janoary ity.
Tsy miandry ela. Vao miandoha ny taona, manomboka avy hatrany koa ny taom-pilalaovana 2016 ho an’ny taranja basikety. Araka izany, hiroso amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara sahady ny federasiona malagasy (FMBB).
Raha ny fandaharam-potoan’izy ireo, lany sy tapaka nandritra ny fivoriambe (AG) natao tany Antsiranana, ny volana desambra lasa teo mantsy, ny fiadiana ny tompondaka nasionaly eo amin’ny basikety ho an’olon-telo na Fiba 3×3 no hisantarana ny taona, ny 30 sy 31 janoary izao, eto Antananarivo, etsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina.
Araka ny fanazavana azo tamin’ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ny FMBB, “open” lehilahy no hanatanterahana ny hetsika amin’ity indray mitoraka sady vao manomboka ity. Eo amin’ny sokajy 18 taona noho mihoatra ihany kosa, afaka milalao sy mandray anjara amin’ny fifaninanana. “Tsy nasiana sokajy vehivavy mihitsy aloha amin’ity taom-pilalaovana 2016 sady santatra ity”, hoy ny tompon’andraikitry ny FMBB. Santatra am-bavarano ihany izy ity, saingy hasiana isan-taona ary mandrafitra ny fandaharam-potoana federaly.
Raha ny mikasika ny hetsika indray, samy manao fifanintsanana eo anivony ireo ligim-paritra. Izany hoe, tsy maintsy manatanteraka fiadiana ny tompondaka rezionaly izy ireo. Hotanterahina ny 23 sy 24 janoary izao, etsy amin’ny kianja mitafo Mahamasina, kosa ny fiadiana ny tompondakan’Analamanga. Amin’ny alalan’ireo fifaninanana rejionaly no hamoahana ireo ekipa 20 hiady lohany amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara eo Fiba 3×3.
Raha ny fanazavana hatrany, ekipa 10 ny avy amin’ny ligin’Analamanga noho izy maro mpilalao raha iray avy kosa ny avy amin’ireo ligy folo nisoratra anarana mialoha ny 27 janoary, farafisoratana anarana. Izany hoe, ireo ligim-paritra folo nisoratra anarana mialoha ihany no ho raisina amin’ity indray mitoraka ity. Marihina fa manaraka ny fenitry ny federasiona iraisam-pirenena na Fiba ny fampiroboroboana ny Fiba 3×3 maneran-tany. Eo ihany koa ny fametrahan’ny Fiba ny atao hoe One Fiba, manomboka ny taona 2017. Izany hoe, tsy hisy intsony ny Zone eo anivon’ny Fiba fa ho foana tanteraka.